Tirada Dadka Cudurka Coronavirus Ugu Dhintay Turkiga - Awdinle Online
Tirada Dadka Cudurka Coronavirus Ugu Dhintay Turkiga
4 April, 2020 (Awdinle Online) –Wasaaradda caafimaadka Turkiga ayaa shaacisay in 70 qof ay tan iyo Jimcihii shaley ay u dhinteen Fayriska coronavirus, taasoo guud ahaan tirada dadka u dhintay ka dhigaya dalkaas 425 qof.
Wasiirka caafimaadka Turkiga Fahrettin Koca, ayaa weriyayaasha u sheegay in illaa hadda la baaray 20,921 qof iyadoo 2,786 qof laga helay fayriska.
Wasiirku waxa kale uu sheegay in 484 bukaan ah ay hadda ka soo bogsadeen xanuunka, waxaana xanuunka illaa hadda u jiifa isbitaalada 1,251 qof.
Fayriska COVID-19, oo markii horre uu ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, ayaa waxaa uu gaaray ugu yaraan 181 waddan, waxaana u dhintay 58, 000 oo qof, halka hal milyan oo qof uu guud ahaan ku dhacay xanuunka, sida ay shaacisay hey’adda caafimaadka adduunka WHO.
Previous articleKuwait oo xaqiijisay dhimashadii ugu horeysay ee Corono Virus
Next articleQarax ka dhacay Waqooyiga Gaalkacyo iyo Mas’uul ka tirsan Puntland oo ku dhaawacmay